Tsidika · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Tsidika · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Tsidika tamin'ny Jolay, 2018
Azia Atsinanana28 Jolay 2018
Efa ela ve ianao no te-hitsidika an'i Japana, saingy tsy mba afaka nanao izany? Na angamba tsy nanam-potoana, na lafo loatra ny tapakila fiaramanidina (sy ny zava-drehetra hafa momba ny fandehanana hiala-sasatra). Aza manahy--manao ny fitsangatsanganana rehetra ho anao ny fantsona Youtube Kappa2700s.
Amerika Avaratra27 Jolay 2018
Azia Atsimo23 Jolay 2018
Inona no resahin'reo bilaogy Bangladeshita
Eoropa Afovoany & Atsinanana22 Jolay 2018
Amerika Latina17 Jolay 2018
Nepal: Maresaka ny fianihana ny Tendrombohitra Everest
Azia Atsimo05 Jolay 2018
Isaky ny vanim-potoanan'ny fiakarana tendrombohitra dia mahasarika mpihanika tendrombohitra an-jatony manerana izao tontolo izao ny Tendrombohitra Everest. Ny Sherpas no lakilen'ny fahombiazana amin'ny fihaniana kanefa tsy mba mahazo fankasitrahana ireo.